FOCUS L Ashere is a China famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
iimveliso zethu ziquka iintlobo ezintathu ezingundoqo iimveliso ifayibha laser Umatshini ukumakisha, Umatshini yokumakisha CO2 laser kunye UV laser umatshini lokumakishela. Ngokusekelwe kwi-laser ubuchwepheshe yethu yaba 3D kumatshini ifayibha laser, nokukrola (Umatshini ngentlabo Deep), Dynamic UV laser umatshini ngentlabo, umatshini ezitshintshayo CO2 laser umatshini engaving, laser iphaphazela ukumakisha, ifayibha laser umatshini ukusika, umatshini laser ukuwelda kunye njalo njalo.
Ngaphezu kwama-20 series. Iimveliso ezenziwe kunye neenkonzo ukunika abathengi kunye inzuzo enkulu. Ngenxa umgangatho ophezulu iimveliso zethu kunye nokusebenza oluthembekileyo, ukuba ezisetyenziswa kakhulu elektroniki, yentsimbi, imodeli kwezigqibo, iimpahla, izihlangu, izibhengezo, yokuprinta nokufakwa ezingxobeni, zokudlala kwezigqibo, kwakunye namashishini ngaphezulu.
Okungqongqo Q uality I nspection For Machine
Ukuqinisekisa umgangatho kunye nozinzo matshini, FOCUS Laser usebenzisa izixhobo imveliso kunye novavanyo eziphambili, kubandakanywa laser imitha leyo yayithengwe USA, CNC koomatshini besila, ukukrwaqula esipilini, AC ombane bume amandla enomzami wokulungisa indlela ezinzileyo, inkqubo focus.
Kwaye ukusebenzisa igumbi thermostat yokulinganisa, 3D isixhobo yokulinganisa, laser dynamometers, ibhulorho digital, kunye nezixhobo phambili ukukhangela umgangatho nokusebenza kwezixhobo yethu laser kwimizi kwinyathelo ngalinye imveliso ukuqinisekisa umgangatho umatshini wethu kunye nokusebenza izinzile.
Iindleko C ontrol
FOCUSLASER inikeza efikelelekayo, umatshini ezikumgangatho ophezulu. Ngenxa iingenelo China, inzuzo ngokupheleleyo ngokwemigqaliselo ezisemgangathweni kunye neendleko, ukuthengwa components ezingundoqo baseJamani eUnited States, Japan, Taiwan kunye assemblying kunye lemveliso in China. FOCUSLASER babe ubonelelo-chain-nkqubo kakhulu iinxalenye kunye namacandelo, kwaye ingxelo esiluqilima ezisemgangathweni kunye ezintsha, ukuqondakalalisa ukuba yethu kwiminyaka-10 ukusebenza matshini.
FOCUSLASER idibanisa italente yobungcali kunye nobuchwepheshe, uye abasebenzi abaneziqinisekiso kakhulu. Kuphuhliso kuyilo yentsimbi, uvavanyo inkqubo software, iinkonzo zobugcisa azaliswa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nobugcisa.
FOCUSLASER ezikhuphile 23 amalungelo abenzi hardware ne-software entsimini obuchwepheshe obuphezulu. Thina lisebenza R & D elide kunye namava omninzi laser entsimini kwaye thina "Hi-Tech Enterprises" e-China.
nendawo Focus Laser sibonelela emininzi namathuba ukuba yokunciphisa iindleko zemveliso, ngokwenjenjalo kuncitshiswe amaxabiso zethu. Ikomkhulu FOCUSLASER ibekwe e Guangzhou eyaziwa ngokuba Canton malunga 120 km (75 mi) kumntla-ntshona we Hong Kong kwaye 145 km (90 mi) kumntla Macau, Guangzhou unembali kwiminyaka engaphezu 2.200 naswona a a terminus engundoqo umiswa silk Road kunye iyaqhubeka ibe enkulu izibuko kunye nokuthuthwa hub namhlanje, kwakunye njengomnye wemizi China ezintathu ezinkulu. Apho sibe nenkqubo best iimveliso ezifanayo kube lula kuqaliswa ubuchwepheshe kunye nemveliso izixhobo eziphambili, iitalente, kwaye esebenzisa iintlobo ngeentlobo zezithuthi lwaselwandle emoyeni, nako ukunika izixhobo laser ezikumgangatho ophezulu kunye ixabiso ezifikelelekayo thina.
Quality yokusebenza ngemveliso kunye negama elihle, iimveliso FOCUSLASER azikho sell ngempumelelo kuphela eTshayina, kodwa aye athunyelwa kumazwe nemimandla ezingaphezu kwama-90 ehlabathini, kuquka: Germany, eUnited States, Italy, eRashiya, eJapan, South Korea, Turkey, Brazil, India, i-United Arab Emirates, Saudi Arabia kunye namanye amazwe, iimveliso baphantsi wamkelekile enkulu nendumiso. Sisoloko kakhulu abathengi 'intembeko kunye nenkxaso FOCUSLASER.
Ukuba banyuse oomatshini ezingcono ixabiso ilungileyo, kwaye inika inkonzo anelisekile emva-yokuthengisa umthengi.
Ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe koomatshini zethu laser, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi